Warqad Furan oo ku socota Madaxwaynaa maamul goboleedka Puntland Mudane Cadde Muuse Xirsi | maakhir.com
Warqad Furan oo ku socota Madaxwaynaa maamul goboleedka Puntland Mudane Cadde Muuse Xirsi
October 20, 2007 in Articles, Maakhir | Tags: Maakhir, Puntland, Somalia
Taariikhdu waa buug ninba baal ku qoran yahay.
Faalo:- Waxaanu aad uga xunahay sida foosha xun ee loola dhaqmay dhalinyaradii gurigooda lagu weeraray, oo loo adeegsaday hubka culculus ee wax gumaada taasina waxay ka markhaati kacaysaa heerka uu gaadhsiisan yahay cadowtinimada iyo arxan darada maamulkaagu u hayo beesha sanaag bari oo kamida beelii hormoodka ka ahaa asaaskii maamulka aad madaxda ka tahay.
soomalidu waxay lahaan jirtay dhaqan soo jireen ah iyo xeer dhaqameed lagu xaliyo khilaafka oo ay matalaan Odayaasha,Cuqaasha,Salaadiinta loogana danbayn jiray khilaafka bulshada. balse waxaa nasiib daro ah in maamulkaagu qadarin waayey odayaasha beesha kaalintoodii nabadayta oo sida saxaafadu cadaysay waxaa ciidanka booliiska amar lagu siiyey inay guriga burburshaan iyo waxa ku jiraba.
Hadiiba ay jirto eedaymaa maamulka puntland usoo jeedinayo dhalinyarada oo ay ku lug lahaayeen falal denbiyeed iyo lxasilooni daro inay ka abuuraan magaalada Boosaaso sow may ahayn in lagala tashado odaasha beesha warsangeli ee ay ka dhasheen waayo tolku waa is yaqaan oo wixii rabshad iyo amaan daro wada meel baa looga soo wada jeedsan lahaa iyadoo laga midaysan yahay.
Dhalinyaradu uguma horayn denbiilayaal haday jirto eedaymaha la sheegayo waxaanse aad uga xunahay sida loo maamulay arintan oo ah mid taariikhda baal madow ka gashay. Hadii aan dhakhso khaladaadkan loo sixin wuxuu horseedi kara khilaaf baahsan iyo colaad dhex marta beelaha wada dhashay ee ku wada nool magaalada Boosaaso iyo nawaaxigeeda.
Qadiyada laascaanood waxaa sabab u ah siyaasad xumida maamulkaaga, had iyo jeerna kuhowlan inay ka shaqeeyaan kala qaybinta iyo kala qobqobka beelaa wada dhashay ee Dhulbahante,Warsangeli iyo Majeerteen. Hadaba maxaa la gudboon maamulkaaga?
Waxaa soo jeedinayaa arimaha soo socda in wax laga qabto.
1)Waa in gudi loo saaro arintan baadha xaqiiqda dhabta ah ee la xidhiidha eedaymaa wiilasha loo soo jeedinayo
2) Waa in masuuliyiinta arintan ku lug lahaa ogolaadaan khaladkooda, xukuumaduna ay ka bixiso magdhow khasaaarii ka dhashay halkaas iyo weliba public apology.
3) Maamulku waa inay ka shaqeeyaan nabada,midnimada iyo xasiloonida shacabka, kana fogaadaan wax kasta oo khilaaf iyo tuhun ka dhex abuuri kara beelaa Harti ee walaalaa ah.
4) Waa in la xaq dhowro sharafta qofkasta oo muslim ah oo yimaada deegaanada beesha Harti ama haku yimaado ganacsi ama si kaleba
5)Waa in la abuuro gudi odayaal ah oo ka madax banaan maamulka, kana shaqeeya amaanka iyo xalinta khilaafka internal-ka ah.
Gagabadii iyo gunaanadkii “gaal iyo islaamba nabadu waw gogol nasteexaade” waxaan ugu baaqayaa maamulka uu Mudane Madaxwayne Cade Muuse Xirsi madaxa u yahay iyo dhamaan dadka ku abtirsada beesha Harti inay iska kaashadaan nabada,midnimada xiligan oo lagu jiro xaalad colaadeed guud ahaan wadanka soomaliya oo xaaladiisu kasii darayo.
Cismaan Maxamud maxamed (foodcade)
« Maamulka Maakhir iyo Odaayshuba maxay uga hadli waayey wiilashooda oo jeelasha Bosaaso laga buuxshey?
“Talo walaal diide tagoogaduu kajabaa” »